फिदिम नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशत « Mechipost.com
फिदिम नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशत
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०७८, शनिबार १७:३५
पाँचथर, ३० साउन
पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको समीक्षात्मक प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत खर्च अपेक्षित हुन नसक्दा वित्तीय प्रगति ७७ प्रतिशतमा सिमित भएको हो । गत आ.व.मा फिदिम नगरपालिकामा चालु र पुँजीगततर्फ गरी कूल ९६७ वटा योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएकामा ९०५ वटा सम्पन्न भएका हुन् । स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि रु. ९६ करोड ७३ लाख ११ हजार ५०९ बजेट बिनियोजन भएकामा रु. ७४ करोड ८७ लाख ७३ हजार ५८४ खर्च भएको हो ।
फिदिम नगरपालिकामा चालुतर्फ ३४३ वटा योजना तथा कार्यक्रममा रु. १६ करोड ५३ लाख ६० हजार बजेट स्वीकृत भएको थियो । जसमा ३३० वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु पूरा हुँदा रु. ११ करोड ७५ लाख ४० हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फका योजना र कार्यक्रमहरुमा ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल भएको नगर प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले जारी गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ ६२४ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रु. ८० करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट स्वीकृत भएको थियो । जसमा ५७५ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुँदा रु. ६३ करोड १२ लाख २२ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फका योजना र कार्यक्रममा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
गत आ.व.मा फिदिम नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास क्षेत्रका ३६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएकामा ३४७ वटा सम्पन्न भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भौतिक र वित्तीय प्रगति समान ९० प्रतिशत रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फका २३४ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएकामा २२६ वटा सम्पन्न भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ फिदिम नगरपालिकाले ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेतापनि वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशतमा सिमित भएका छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण धेरै योजनाहरुको काम सुरु भएपनि सम्पन्न नहुँदा वित्तीय प्रगति निकै कमजोर देखिएको हो । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ २१५ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत भएकामा १९६ वटा सम्पन्न भएका छन् । जसमा भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत हाँसिल भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सदरमुकाम समेत रहेको जिल्लाको एकमात्रै नगरपालिकाले समेत पूर्वाधार विकासमा यथेष्ट प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको हो । विगत लामो समय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा काम गर्नुभएका फिदिम नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रेम काफ्लेका अनुसार पूर्वाधार योजनाहरु पूरा गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा प्राविधिक जटिलताहरु धेरै हुने गरेका छन् ।
“फिदिम नगरपालिकासँगै भनेजति प्राविधिक जनशक्ति छैनन्”, काफ्लेले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको बीचमा योजना थप गर्ने कार्यले पूर्वाधारका योजना सञ्चालनमा झनै समस्या आउने गरेको छ ।” प्राविधिकहरुलाई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उपभोक्ताबाट उचित सहयोग प्राप्त नहुने, स्रोत साधनको अभाव हुनेजस्ता समस्या समेत देखिने गरेका छन् ।
विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय बनाई यथेष्ट भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हाँसिल गर्न गाउँ÷नगर सभाबाट पारित भएका योजनाहरुलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न इन्जिनियर काफ्लेको सुझाव छ । “अस्ती असार २४ गते पनि योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन भयो”, काफ्लेले भन्नुभयो, “आफैँ योजनाको छनौट गर्ने, आफैँले कार्यान्वयन गर्ने र आफैँले अनुगमन गर्ने स्थानीय तहमा त यो हालत छ भने अन्यत्र कस्तो अवस्था होला ?”
फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले गत आ.व.मा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको धेरै प्रभाव परेको भन्दै आगामी दिनमा विगतबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी योजना सञ्चालन र यथेष्ट प्रगति हाँसिल गर्नेतर्फ नगरपालिका अगाडि बढ्ने वताउनुभयो ।